Khuphela iividiyo zeBildi ➵ Esona sisombululo silungileyo sokukhuphela imiboniso bhanyabhanya kwi-anime kaBili, iividiyo, imanga, imibhalo engezantsi, iifoto, ifilimu, iifayile, izimvo ezivela eBilolu
Usebenzisa uhlobo oludala. Cofa apha ukufaka inguqulelo yamva nje 1.1.3
Khuphela iividiyo zeBildi
❝Khuphela iividiyo kwiBilibili ekumgangatho ophezulu❞
➶ Esona sisombululo silungileyo sokukhuphela imiboniso bhanyabhanya kwi-anime kaBili, iividiyo, imanga, imibhalo engezantsi, iifoto, ifilimu, iifayile, izimvo ezivela eBilolu
Bilibili.com iza neevidiyo ezininzi ze-anime kunye nemanga. Uninzi lwabalandeli be-anime bangathanda ukukhangela indlela ngendlela yokukhuphela iividiyo kwiBilibili mahala. Apha siza kwabelana ngendlela ekhawulezayo nesimahla yokukhuphela iividiyo zeBilbe.
Khuphela uKhuphelo kwiChannel / Firefox
Ukongezwa kweBilolu kukuvumela ukuba ukhuphele ividiyo kunye ne-thumbnail ukusuka kwiBilibili. ➥ Faka ngoku
Ungayikhuphela njani iividiyo zeBildi ngolwandiso lwe-Chrome kunye nokongezwa kweFirefox
Ndikuthanda kakhulu ukubukela iividiyo ku-Bilibili kwaye ukuba uthanda i-BilUni njengam, landela isifundo esilandelayo ukuze usebenzise olona luhlu lusezantsi lweBilibili ukuze usindise ividiyo kwiBilUU. Masihambe!
Vula iwebhusayithi yeBilibili.
Dlala ividiyo kwi-Bilibili.
Vula ividiyo yokukhuphela umatshini wevidiyo uChannel / Firefox ➥ Faka ngoku
☀ Khuphela iividiyo ezininzi.
☀ Khuphela i-manga kwi-Bilu.
☀ Khuphela ividiyo ebukhoma.
☀ Khuphela umfanekiso weBildi
☀ Khuphela imibhalo engezantsi ye-Bilu (isihloko esivaliweyo).
☀ Khuphela iVidiyo epheleleyo ye-HD 1080p kwiBilibili.
☀ Khuphela iikhomenti ku-Bilu.
☀ Khuphela iithegi zevidiyo zeBilundi.
☀ Khuphela ngokuzenzekelayo kunye nokugcina ifayile ngokwesihloko sevidiyo kunye nomgangatho okhethiweyo.
Bilibili, iqonga lokusasaza ividiyo eliphefumlelwe yindawo yevidiyo yaseJapan uNiconico. Le yiwebhusayithi yokwabelana ngevidiyo ngomxholo opopayi, amahlaya kunye nemidlalo. Abasebenzisi banokungenisa, ukujonga kwaye bongeze imibhalo engezantsi kwiividiyo.
Ukukhuphela ividiyo yeBilUU
Sinokubukela ii-movie ze-HD zeBhiliu naninina unesantya esiphezulu kwi-intanethi. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kuya kufuneka ubukele ividiyo ye-HD. Oku kukukhuphela ividiyo yeBilU HD inokukunceda ugcine iividiyo zeHD njengePM4 HD esemgangathweni ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho.
Uluhlu lwadlalwayo lweBiloli
Khuphela iividiyo ze-Bildi kwi-batch ngaxeshanye. Khuphela uluhlu lokudlala lwevidiyo kaBilibili okanye isitishi ngokuchofoza nje okukodwa.
Khuphela umfanekiso weBildi
Khuphela indawo ye-Bilolu epheleleyo kwi-1080p.
Ibhonco yokukhuphela ividiyo hd kwi-intanethi
Bilu 1080p ukhuphelo, Bilu khuphela hd.
Guqula i-bilu ibe yi-mp3
Isiguquli seBiloli, uBoniselo lokukhuphela mp3
Ukulanda ukulandwa kweBilibili kusebenza kakuhle kwiGoogle Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser kunye nakweyiphi na ibrowser. Ukongeza, iyahambelana kakhulu nenkqubo yokusebenza kweMac.
Fumana imibuzo kunye neempendulo zakho apha - Uyigcina njani ividiyo yeBilibili?
+ Ungayibukela njani iividiyo zeBildi Ngaphandle kweTshayina? Ungamvulela njani uBhili.
Ngaba ufuna ukubukela iividiyo ku-Bilibili kodwa usilele? Kutheni usombulula njani? Kufuneka ubhalisele i-VPN kunye nevidiyo yevidiyo ene-HTML5.
+ Ungayikhuphela njani / ugcine iVidiyo eziPhakamileyo ezikwiBilibili?
Unokukhuphela kuphela iividiyo kwiBilU ngoncedo kulwandiso lwebrowser lweChannel okanye iFirefox
+ Ndizikopa njani iividiyo zeBilibili kwi-intanethi ngaphandle kwesoftware?
Awunakho ukukhuphela iividiyo kwiBilibili ngaphandle kokusebenzisa isoftware.
+ Ungayikhuphela njani iVidiyo yeBilibili kwiMP3?
Fakela ulwandiso lwe-Chrome okanye iFirefox ukufumana ikhonkco lokukhuphela lomsindo kwiBilUU. Umguquli uya kuthi ngokuzenzekelayo aguqulele ifayile ye-audio kwi-mp3.
+ Kuthekani ukuba andikwazi ukukhuphela iVidiyo kwi bilibili.com?
Ukuba awukwazi ukukopa iividiyo zeBilbe ngqo, ungasebenzisa isoftware yokurekhoda ividiyo ukurekhoda iiklip zevidiyo ozifunayo.
+ Ungayibhalisa njani i-Akhawunti kwi-Bilibili?
Yiya e https://passport.bilibili.com/register/phone.html
Eli phepha elingagqibekanga lifuna inombolo yefowuni yokubhalisa. Kodwa ndiza kuphakamisa ukubhalisa ukusebenzisa i-imeyile. Ke nqakraza kwibhokisi ebomvu ukubhalisa ukusebenzisa i-imeyile. Gcwalisa ifom ngegama lomsebenzisi, iphasiwedi, i-imeyile kunye nekhowudi yokuqinisekisa. Ungalibali ukukhangela ibhokisi yemeko kunye nemeko. Konke kwenzekile.
+ Kutheni ufuna uBil downloader weVidiyo?
Zonke ezi vidiyo ze-Bildi azinakho ukukhutshelwa kwi-Bilibili play interface yayo. Okubi ngakumbi kukuba, kukho indawo zokukhuphela ividiyo ye-intanethi yokukhuphela ividiyo yasimahla, nangona kunjalo uqhekeka okanye uyeka ukusebenza rhoqo ngoku emva koko. Kule meko, indlela engcono yokukhuphela naziphi na iividiyo ezivela kwiBilbe ngaphandle kwezithintelo kukufakela iVidiyo yokuLanda iVidiyo.
Ukukhuphela ividiyo ka-Bilu mp4 - khuphela ividiyo ye-Bilu hd online
9 I-Rated abasebenzisi
Ukuba unethemba lokonwabela iividiyo nangona ungaxhunyiwe kwi-Intanethi, ke le vidiyo yokukhuphela ividiyo yasimahla yeBilU iluncedo. Ngenxa yenkqubo yayo yokukhuphela ngokukhawuleza uya kukwazi ukukhuphela kunye nokubukela iividiyo zamva nje ngokulula kwakho.
Ukukhuphela iividiyo akukaze kube lula njengoko ngaphandle kokubhalisa naphi na apho unokufumana ividiyo yeBilibili. Ndiyamangaliswa kuba ividiyo endiyithandayo ikhutshelwa kwinxalenye nje yemizuzu.
Unokukhuphela iifayile zeBilbe anime ngoncedo lokukhuphela ividiyo. Nasi esona sisombululo sisiso kuwe sokukhuphela nayiphi na iividiyo zeBilbe.
Ukukhuphela usetyenziso lweBilibili- Khuphela i-anime / imuvi / iividiyo zomculo kwiBilUU 2022